Maxaa kasoo kordhay Qaraxa Caawa ka dhacay Magaalada…
Abaare 7:30PM Caawa waxa uu qarax Miino ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama gaar ahaan inta u dhaxeysa Isgoysyka Taleex iyo Tareebiyaano, waxaana ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay afar ruux oo kala ah 3-Rag ah iyo Haweeney.
Mid kamid ah Isbitaallada ku yaalla Magaalada Muqdisho ayaa la geeyay dadka dhaawacmay si looga daweeyo waxyeelada gaartay, xaaladooda Caafimaad ayaa la sheegay in ay faraha kula jiraan dhaqaatiirta isbitaalkaas.
Xiliga uu qaraxa dhacayay waxaa wadada mararay Gaariga Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdinaasir Siciid Muuse
Hay’adaha ammaanka Xukumadda ayaa bilaabay baaris ay ku xog ogaanayaan dadka ka dambeeyay Qaraxaas, dabagal kadib ayay soo bandhigi doonaan natiijada usoo baxdo sida saraakiisha Booliiska ay sheegeen.
13-kii Bishaan Julay, Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Gen. Odowaa Yuusuf Raage ayaa ka badbaaday Qarax lala damacsanaa in lagu dilo, waxaana loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagu soo raray.
Qaraxyada ka dhacaya Degmada Hodan ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii kordhayay, labo jeer waxa uu qarax miino ka dhacay agagaarka Madaxtooyadii hogamiyihii Dowladdii Carta Cabdisaamin oo u dhaw Isgoyska Taleex.